Momba anay, kofehy fanaovana amboradara, ozinin-kofehy fanjairana polyester
Ningbo MH Thread Co., Ltd dia orinasa iray ao amin'ny Ningbo MH Industry Co, Ltd. Nifantoka tamin'ny fanjaitra kofehy ary fanamboarana kofehy vita amin'ny kofehy izy ireo nandritra ny 12 taona. Ankehitriny MH dia manana faritra telo indostrian'ny indostria misy tanimboly 120,000m2, mpiasa 1900, ary manana milina manara-penitra avo lenta ary rafitra fitantanana famokarana hentitra, afaka mamatsy mpanjifa hanana kalitao sy fahatokisana tena tsara isika.
Drafitra famokarana lozobe MH manjaitra ao anatin'izany ny: fanodinam-borona, fandokoana, fofonaina, fonosana ary fitiliana. 30000+ taonina ny fahaizany mamokatra isan-taona. Ny vokatra ao anatin'izany ary ny polyesters spun sy corespun amin'ny fatorana nylon sy ny braids polyester, dia misy amin'ny habe sy karazany manokana ahafahana manome izay rehetra ilain'ny mpanjifa. Fanomezana kofehy ny MH ho an'ny mpanamboatra fitafiana eran-tany, ny lamba firakotra, ny karipetra, ny lamaody an-trano, ny indostria, ny fonosana ary ny vokatra hafa nozaina manerantany, eken'ny mpanjifa manerantany manana kalitao mendrika amin'ny vidiny mifaninana.
Ny MH Embroidery Thread Industry dia manana andiam-pamokarana feno fihodinana, fandokoana, famolavolana ary famolavolana, izay miantoka ny famokarana ara-potoana miaraka amin'ny vokatra tsara kalitao ho an'ny kofehy amboradara rayon sy kofehy amboradara polyester, ny fahaizantsika mamokatra isan-taona dia 10000+ taonina. Ny hamafiny, ny loko vitsivitsy, ny loko tsara, ny tahony malefaka ary ny fahamainan'ny loko no omenay ny mpanjifa.
Samy nahazo ny mari-piatoana ISO9001 sy OEKO-TEX avokoa ny MH Sewing Industry Industry sy ny MH Embroidery Industry Industry, isika dia miaro ny fiarovana ny tontolo iainana, isan-taona amin'ny fampihenana ny fampiasana angovo sy ny teknolojia entina hampiroboroboana ny fitaovana maoderina, ny angovo ary ny rano.